Mpikamban’ny governemanta : Manohy ny asa fampandehanan-draharaha
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fanambarana nataony omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, fa mbola manohy ny asa fampandehanan-draharaha ireo mpikamban’ny governemanta rehetra mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao. Ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny governemanta tarihiny …Tohiny
Voatendry omaly ihany, taorian’ny fametraham-pialan’ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Mahafaly Olivier ny praiminisitra vaovao mandimby azy, Ntsay Christian. Noho izany indrindra, dia nitondra ny heviny ny depiote voafidy tao amin’ny distrikan’i Betroka, Nicolas Randrianasolo, tamin’ny …Tohiny
Kidnapping an’i Chandarana Rishi : Ny fiarany ihany no nitondran’ireo jiolahy azy
Nitovy tsy nisy valaka tamin’ny raharaha kidnapping an’i Navage Veldjee teny Ampasampito no nataon’ireo jiolahy nanao fakana an-keriny an’i Rishi Chandarana ny alahady tolakandro lasa teo. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia ny …Tohiny
Mpianatra ho manamboninahitra 30 mianadahy avy amin’ny firenena Amerikana no noraisin’ny sekoly nandritra ny 9 andro izay nifarana ny 2 jona lasa teo. Fifampizarana traikefa sy fianarana ny fomba amam-panao malagasy, indrindra fa ny tafika …Tohiny
Efa manomboka sahady amin’izao fotoana izao ny fanakorontanana sy ny fampihorohoroana ataon’ireo tsy mahazaka demokrasia. Nitrangana fanakorontanana mantsy omaly ny lanonam-pitokanana efitrano fanaovana fanatanjahantena nataon’ny filoha Hery Rajonarimampianina tao Fianarantsoa. Teny amin’ny kianjan’ny fahamarinana nanoloana ...Tohiny